ဂျပန် ကာတွန်း ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတော့ မဖြစ်မနေကို ကြည့်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင် - YOYARLAY Digital Media and News
ဒီနေ့မှာတော့ အပန်းပြေ ကြည့်စရာ ဇာတ်ကားကောင်းလေးတွေအကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်၊ ဇာတ်ကားကြည့်တယ်ဆိုတာကလည်း အပန်းလည်းပြေ၊ ဗဟုသုတလည်းရနိုင်မှ အချိန်ကုန်ရကျိုးနပ်တာ မဟုတ်ပါလား … ဘာမှ မရရင်တောင် ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ခံစားချက် တစ်ခုခုကျန်နေမှ ရုပ်ရှင်ကောင်း တစ်ခုလို့ သတ်မှတ်နိုင်တာပါ။
ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ဆိုရာမှာလည်း ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ကြည့်ကြတာ မဟုတ်လား .. တစ်ချို့က စစ်ကားတွေ ကြိုက်မယ်၊ တစ်ချို့ကတော့ ဒရာမာကားတွေ ကြိုက်မယ်၊ တစ်ချို့ကလည်း ဟာသကားတွေကြိုက်မယ် (ပေါကား မဟုတ်ပါ)၊ တစ်ချို့ကတော့ ကာတွန်းကားတွေ ကြိုက်တတ်ပါတယ်။
လူတွေရဲ့ သဘာဝအရတော့ ကိုယ်ကြိုက်တာမှ အကောင်းထင်တာအပြင် ကိုယ်မကြိုက်တာ ကြည့်နေရင် ဪ သူကြိုက်တာ သူကြည့်နေတာပဲလို့ မတွေးနိုင်ဘဲ ဟင်.. ဒါကြီးကို ဘာလုပ်ဖို့ ကြည့်နေတာလဲဆိုတာထိပါ တွေးတတ်ကြပါတယ်။ တွေးရုံမကဘူး ပြောပါ ပြောတတ်ကြပါသေးတယ်.. ဒါမျိုးကိုတော့ ကာတွန်းကားကြိုက်တဲ့ လူငယ်တွေ၊ လူကြီးတွေ အများဆုံး အပြောခံရလေ့ရှိပါတယ်။
ကာတွန်းကားဆိုတာ ကလေးကြည့်တာ၊ အသက်အရွယ်က ငယ်တော့တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ ကာတွန်းကားတွေ ကြည့်နေတယ်၊ ကလေးမဟုတ်၊ သူငယ်မဟုတ် စသဖြင့်ပေါ့.. ဒါပေမဲ့ ကာတွန်းကားတွေမှာလည်း ကာတွန်းကားအလိုက် ပေးနိုင်တဲ့ ရသတွေ၊ Message တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Message ကောင်းကောင်းလည်း ပေးနိုင်၊ ရသလည်းမြောက်တဲ့ ကာတွန်းကား အဟောင်းလေးတွေကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်..
ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ Grave of the Fireflies ဆိုတဲ့ ကာတွန်း ရုပ်ရှင်လေးပါ။
ဒီဇာတ်ကားကို ညွှန်းသာ ညွှန်းပေးရတယ်၊ ကျွန်တော်တော့ ဒုတိယအကြိမ် ကြည့်ဖြစ်မယ် မထင်ပါဘူး။ မကောင်းလို့ မဟုတ်ဘူးနော်.. နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်မကြည့်ရဲလောက်အောင် ကောင်းလွန်းလို့ပါ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့ စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်တွေကို ထင်ထင်ရှားရှားပြသခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာ ဇာတ်ကောင်က Seita နဲ့ Setsuko ဆိုတဲ့ မောင်နှမလေး နှစ်ယောက်ပါပဲ။ ဘေးဒုက္ခတွေ အမျိုးမျိုးကြားထဲက အသက်ရှင်သန်အောင် ကြိုးစားရုန်းကန်ကြရရှာတဲ့ မောင်နှမလေး နှစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်ဟာ တကယ်ကို ရင်နင့်စရာပါ။
အမေရိကန်တွေ ကြဲချလိုက်တဲ့ ဗုံးကြောင့် မိခင်ကြီးကလည်း မီးလောင်သေဆုံးတဲ့အပြင် သွားစရာနေရာမရှိတဲ့ မောင်နှမလေး နှစ်ယောက်ဟာ အဒေါ်တစ်ယောက်ဆီမှာ သွားနေရရှာပါတယ်။ အဒေါ်ဖြစ်သူကလည်း ကြင်ကြင်နာနာပါပဲ..သူ့ဆီက ထမင်းလေးစားရဖို့အရေး ဆုံးသွားတဲ့ မိခင်ကြီးရဲ့ ကီမိုနိုနဲ့ လဲစားရတဲ့အဖြစ်ပါ။
ဆွေမျိုးတွေနဲ့ နေနေတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ Seita ဟာ သူဝှက်ထားတဲ့ စားစရာတွေ အကုန်လုံးကို အဒေါ်ကို ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဒေါ်အကြောင်း သိနေတာကြောင့် စားစရာအနည်းငယ် (Skuma Fruit drops သံဘူးသေး) ကိုတော့ ဝှက်ထားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အဒေါ်က စားစရာတွေ ပေးတုန်းတော့ နေခွင့်ပြုခဲ့ပေမယ့် တဖြည်းဖြည်း နည်းလာတဲ့အခါမှာ သူချက်ထားတဲ့ စားစရာတွေကို ထိဖို့တောင် မကြိုးစားနဲ့ ဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဒီအချိန်မှာတော့ ခိုကိုးရာမဲ့ မောင်နှမလေး နှစ်ယောက်ဟာ အဒေါ်ဆီက ထွက်သွားပြီး စွန့်ပစ်ထားတဲ့ ဗုံးကျင်းမှာနေဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်…
ဒီမောင်နှမလေးနှစ်ယောက်ဟာ ဒီဒုက္ခတွေကနေ အသက်ရှင်လျက် လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား?
စစ်ရဲ့ဒုက္ခတွေကို အရွယ်နဲ့မမျှ အံတု ရင်ဆိုင်နိုင်ပါ့မလား?
ချစ်ခြင်းဟာ အရာရာကို အောင်နိုင်ပါ့မလား?
မေတ္တာစစ်ဆိုတာကရော တကယ်ပဲ ရှားပါးသွားပြီလား?
ဒုတိယမြောက် မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးကတော့ “UP” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ။
ဒီဇာတ်ကားက ထွက်ရှိတာလည်း အတော်ကြာပြီမို့ ကြည့်ပြီးသူတွေလည်း များနိုင်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ အဘိုးကြီးနဲ့ ဝတုတ် ကလေးလေးနဲ့ အကြောင်းဖြစ်ပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းရဲ့ နိဒါန်း ၄မိနစ်မှာတော့ အဘိုးကြီးနဲ့ ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို အနုစိတ် ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ နောက်က ဇာတ်လမ်းထက် ရှေ့က ဒီ ၄မိနစ်စာ နိဒါန်းလေးဟာ ရင်ကို နင့်စေခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကွက်လေးလို့ ဆိုရမှာပါပဲ.. အချစ်ကြီး ချစ်ခဲ့ကြတဲ့ ချစ်သူနှစ်ယောက်ကို သေခြင်းတရားက ကွဲကွာစေတဲ့နောက်မှာတော့ အထီးကျန် ဝေဒနာနဲ့ အဘိုးကြီးဟာ ဘယ်သူနဲ့မှ စကားပြော အဆင်မပြေတဲ့ လူ့ဂွစာကြီး ဖြစ်လာပါတော့တယ်…
ဒီကြားထဲ တိုးတက် မြင့်မားလာတဲ့ ဗိသုကာ ပညာနဲ့အညီ အထပ်မြင့် မိုးမျှော်တိုက်တွေ ဆောက်ဖို့ သူ့အိမ်က ကိုးလိုးကန့်လန့် ဖြစ်နေလို့ အိမ်ကိုရောင်းဖို့ လာညှိနှိုင်းကြတဲ့အခါ ချစ်ဇနီး ခေါင်းချသွားတဲ့ အိမ်မို့ မစွန့်ခွာချင်၊ မဖျက်ချင်ဖြစ်နေတဲ့ အဘိုးကြီးက ဒီအိမ်နဲ့အတူ သူတို့မောင်နှံ အိပ်မက်မက်ခဲ့တဲ့ နေရာတစ်ခုကို ထွက်သွားဖို့ ကြံစည်ပါတော့တယ်..
ဒီမှာ သူမသိလိုက်တာက သူ့အတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း လာလုပ်ပေးမယ့် ကောင်လေးက သူ့အိမ်ပေါ်မှာ တိတ်တိတ်လေး ပုန်းခိုလိုက်လာတယ် ဆိုတာပါပဲ.. မိုးပျံပူဖောင်းတွေ အများကြီးနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ အိမ်ကြီးကို မိုးပေါ်ပျံတက်စေလို့ လေယာဉ်မောင်းသလို ပဲ့ကိုင်ထိန်းသိမ်းနေရတဲ့ အဘိုးကြီးနဲ့ ဆတ်ဆတ်ဆော့ဆော့ ကောင်လေးနဲ့ ဘယ်လို အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့ရမှာလဲ? ခဏတာ တွေ့ရတဲ့ အချိန်လေးအတွင်း တွယ်လာတဲ့ သံယောဇဉ်ဟာ သူတို့နှစ်ယောက်ကြားက အဖုအထစ်တွေကို ပြေလည်စေမှာလား? အဘိုးကြီး ဇနီးမောင်နှံရဲ့ အိပ်မက်ထဲက နေရာကိုရော သူတို့ ရောက်သွားနိုင်မှာလား? နောက်ထပ်ရော ဘယ်လို အခက်အခဲတွေ တွေ့ကြုံရဦးမှာလဲ?
စိတ်ဝင်စား၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဇာတ်ကားလေး ဖြစ်တဲ့အပြင် စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ သံယောဇဉ်၊ စေတနာရဲ့ ရောင်ပြန် စတာတွေကို ကြည်နူးရင်ခုန်စရာ တွေ့မြင်ရမှာပါ။ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို ၄မိနစ်စာလောက် ရင်နင့်ပြီးသွားရင်ပေါ့.. ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ကာတွန်းကား မကြိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့ သူတွေတောင် ကြည့်မိရင် သဘောကျနှစ်ခြိုက်သွားမယ့် ဇာတ်ကားလေးပါ။
သိကြတဲ့အတိုင်း ဂျပန် ကာတွန်းရုပ်ရှင်တွေဟာ အင်မတန်ကို အသေးစိတ်ကျပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ အပြောအဆို ခံစားချက်တွေ စတာတွေကို လုံးဝအသေးစိတ်ကျကျ စီစဉ် ရိုက်ကူးထားတာမို့ ကြည့်တဲ့အခါမှာ ကာတွန်းကားနဲ့ မတူဘဲ တကယ့်အပြင်မှာ ဖြစ်နေသလိုကို ခံစားရမှာပါ။
ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော် ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ခံစားရလွန်းလို့ နောက်တစ်ကြိမ် မကြည့်ရဲလောက်အောင်ကို ဖြစ်သွားတာပါ။ တကယ့် တကယ်ကို ကောင်းလွန်းတဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ ကောင်းလွန်းဆိုလည်း ဒီရုပ်ရှင်က လက်တွေ့နဲ့ တကယ်ကို နီးစပ်တာကိုး .. ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားက အဖြစ်မှန်ကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ပါ။ ရုပ်ရှင်ထဲက ဇာတ်လမ်းလေးကလည်း ရင်နင့်စေသလို ပြင်ပလောကက သေဆုံးပြီးသား ညီမဖြစ်သူကို ပိုးလို့ တောင့်မတ်နေအောင် သတိနဲ့ အလေးပြုနေတဲ့ ကောင်လေးရဲ့ ဓာတ်ပုံကလည်း ရင်ကွဲစေပါတယ်။
ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံတောင်မှ ကျွန်တော်တို့ နှလုံးသားကို နာကျင်စေခဲ့တယ်ဆိုရင် ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ တွေးကြည့်ပါ။ ဘယ်လောက်တောင် ရင်နာလိုက်ရမလဲဆိုတာ… “Grave of the Fireflies” ဟာ ဂျပန် ကာတွန်း ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတော့ မဖြစ်မနေကို ကြည့်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားပါလို့ ဆိုလိုက်ပါရစေ။
အစားကောင်းစားရရင် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကို သတိရပါတယ်တဲ့.. ကျွန်တော်ကတော့ စာအုပ်ကောင်းလေး ဖတ်ရရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ရုပ်ရှင်ကောင်းလေးပဲ ကြည့်လိုက်ရရင်ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ ရိုးရာလေး ပရိသတ်ကြီးကို မျှဝေပေးချင်နေတော့တာပါပဲ။ နောက်လည်း ဒီလို ရုပ်ရှင် အညွှန်းလေးတွေ တင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့ ရိုးရာလေးကို စောင့်ကြည့်ကြဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော်
Previous Previous post: ကလေးတွေကို ပုံပြင်လေးတွေ ပြောပြခြင်းဖြင့် ရနိုင်မယ့်အကျိုးကျေးဇူးများ
Next Next post: တောင်ကိုရီးယား သမ္မတဟောင်း လီမြောင်ဘတ်ကို ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်
ကိုယ့်ရဲ့အသည်းစွဲ ကိုရီးယားအနုပညာရှင်တွေက တခြားဘယ်လိုအလုပ်မျိုးနဲ့လိုက်ဖက်သေးလဲ ဆိုတာ တွေးကြည့်ဖူးလား။ Post Views: 3,208